AddThis dia manampy ny fikendrena anao manokana hanatsarana ny fifamatorana, ny fiovam-po ary ny vola miditra | Martech Zone
AddThis dia manampy ny fikendrena anao manokana hanatsarana ny fifamatorana, ny fiovam-po ary ny vola miditra
Alakamisy, Desambra 4, 2014 Douglas Karr
Ny ankamaroan'ny tontolon'ny haitao marketing dia mifantoka amin'ny fahazoana mitsidika. Ny baiting link dia tsy eo amin'ny tabilao ary miteraka vokatra mahatsiravina ho an'ny mpivarotra izany. Ny fahazoana olona mankamin'ny tranokalanao dia tena mora tokoa, saingy sarotra kosa ny mitazona azy ireo any ary mamporisika azy ireo hanao raharaham-barotra miaraka aminao. Na amin'ny famoahana toa ny antsika aza dia zava-dehibe ny fampitomboana ny mpijery antsika - fa raha tsy mifanerasera amin'ny marika resahintsika ny olona dia tsy misy dikany izany rehetra izany.
Tokony hahatratra ireo mpihaino izay liana amin'ny atiny isika - ary rehefa tonga any amin'ny tranonkalantsika ihany isika amin'ny farany, dia mila miasa mafy isika hitazonana azy ireo ao amin'ilay tranokala na hanome fomba ahafahan'izy ireo mirotsaka an-tsehatra lavitra. Izahay manokana dia manao izany amin'ny alàlan'ny fanolorana famandrihana sy tolo-kevitra momba ny paositra mifandraika amin'ny sehatra midadasika.
AddThis dia mampiasa ny herin'ny mpampiasa an'arivony tapitrisa tratra mba hanomezana atiny kendrena manokana hitazomana ny mpitsidika hifandray amin'ny tranokalanao. Natao hanampiana ireo tompona tranokala hampitombo ny fotoana lanin'ny mpampiasa amin'ny tranokalan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fampisehoana atiny sy tolotra manokana ho an'ny tombontsoany manokana.
Rehefa manana mpitsidika voalohany ny tranonkalanao dia tsy fantatrao izay tian'ny mpitsidika na tsindrio azy. Saingy AddThis dia efa mahalala ny tombontsoan'ny mpampiasa sy ny safidiny mifototra amin'ny fifandraisan'izy ireo taloha amin'ny tranokala AddThis hafa. Ankehitriny ny tranonkalanao dia afaka mikendry ny atiny, vokatra na tolotra mifototra amin'ny tantaran'ny mpampiasa teo aloha.
Azonao atao ny manamboatra ny tanjona mora foana ao anatin'ny AddThis:
Ary azonao refesina mora foana ny fiovam-po amin'ny alàlan'ny tabilao AddThis:
Io fampiasa io dia tsy ho an'ny mpanao dokambarotra sy mpanonta ambony ihany. AddThis dia manampy azy amin'ny $ 12 / volana ho ampahany amin'ny fisoratana anarana AddThis Pro, mahatonga azy io ho mora vidy tokoa.
Tags: AddThisfanampin-kevitra momba ny atinytolo-kevitra momba ny atinykendrena atinymanatsara ny tahan'ny fiovam-pomanatsara ny fifamofoanamanatsara ny vola miditramitombo ny fiovam-pomampitombo fifamofoanamampitombo ny vola miditramitazona mpitsidikaatiny manokanamitazona mpitsidika